Ukuzisa abantwana kunye nentsebenziswano ndawonye | Xa abantwana bekhona
Intsebenziswano kunye nabantwana | usapho
Thatha ixesha uze ufumane njengowesibini isibini
Gcina izinto zokuzonwabisa kunye nobungane!
Ekuqaleni usaluthandweni, yonke into iyahamba njengoko kufanelekile. Ubusuku beCinema, izidlo zokukhanyisa ikhandlela kunye neveki kusasa ungalala. Ngoko ngokubumbene ngokubambisana, akukho nto ibonisa indlela yokucwangcisa intsapho.
Ukuzisa abantwana kunye nentsebenziswano
Kodwa isiphelo esiphezulu siyafikelela ekupheleni: kungekudala ulwalamano luhluleka kuphela kunyaka wokuqala emva kokuba inzala izalwe. Abantwana bememeza, ukuxabana, ukulala ebusuku, konke oku kunokwenzeka ukuba benze okungakumbi kwiqabane elincinci kunabanye abasecaleni. Nangona kunjalo wonke umntu uthe ixesha lokuba abantwana bancinci lenye yeyona nto enhle kakhulu.
Ukulinganisa ubudlelwane kunye nosapho
Wonke umntu kufuneka aqale ukusetyenziswa kwendima yakhe entsha
Usana luthetha ukuthatha uxanduva. Akuzona izinto zezimali ezikhathaza intsapho. Ngomntwana uphinde utshintshe indima yakho kulwalamano. Ngokukhawuleza, awukho nje umhlobo, indoda okanye umfazi, kodwa unina okanye uyise, kwaye uneminye imisebenzi.
Ukuba le ntombazana ihlala ekhaya, indoda ngoku kufuneka inakekele umfazi wayo nosana. Amadoda amaninzi afaka olu lwazi phantsi kwengcinezelo kuba indawo yokusebenzela ayibonakaliyo namhlanje njengokuba yayisetyenziswa. Ngakolunye uhlangothi, umfazi, kufuneka anqume ukuba uyazinikela ngokupheleleyo ekunakekeleni umntwana wakhe okanye ekubuyiseleni emsebenzini emva kwexesha elithile, aze afake umntwana kwindawo encinane.
Ukuba uthetha ukuba abe khona kwenzalo yakhe, uyazibamba iqela lomntu wangaphambili kwaye afumane imeko entsha. Yonke into ayisoloko idlwengula, nangona umama osemncinci uyavuya xa enendima yakhe. Iintsuku zobusuku zikhala ngenxa ye-colic okanye amazinyo amancinci okuqala, uxinzelelo kunye nomlingane, ukungaqiniseki, ukuba wenza konke okulungileyo, kunye neenguqu ze-hormone zinikezela kwakhona umhlaba.
Ubomi bemihla ngemihla bobawo abatsha awutshintshi ngokukodwa njengomama. Nangona kunjalo, xa efika ekhaya, akafaneki ukubuliswa ngokumnandi "Sawubona, ndodana yakho, njani usuku lwakho!", Kodwa mhlawumbi uvela kumfazi wakhe ecasulayo, ngaphandle kokuphawula, inzala ixinzelele ezandleni zakhe.
Ngokuqhelekileyo, emehlweni akhe, umfazi owayengumkhathalele ngaphambili ubonakala eguqukile. Ngokuqhelekileyo amadoda ayasabela ngentshiseko kumntwana. Umntwana uya kuqala kuqala - kwaye kuya kuba yinto yokuba abantwana bebaleka.
Ekuqaleni ootata abancinci kufuneka baqhelise. Lapha kuthatha umonde omkhulu, isibindi kunye nokunyamezela okunyamezelayo, ukuze umtshato ungaphumeleli. Izibini ezimbalwa ezinabantwana abalala emva kweeveki ezintathu!
Emva kwithuba elithile, umntu ngokuqhelekileyo ufumanisa ngokunyanisekileyo kwinxaxheba yakhe entsha kwaye uyamkela ukuba njengendoda esibini, kufuneka uhlaziywe kwakhona. Ngako oko, bonke oomama kunye nootata kufuneka bazinyame rhoqo - kwaye bekunjalo ukususela ekuqaleni - kunye. Ngokuqinisekileyo kukho ootatomkhulu othabatha indima yebhititter kanye ngenyanga, bhetele nokuba kabini. Ukuba abahlali kwisiza, unokuphulaphula kwisangqa sazana. Ngokuqinisekileyo umntu uyazi umntwana onokuthenjwa ongathembeki.
Okanye iintsapho ezincinci ziyaxhasana ngokufanayo. Mhlawumbi umntu osuka kummelwane unika uncedo lokunyamekela umntwana. Thatha naluphi na uncedo apha! Ubambiswano luzuzwa kulo xesha elibelwanayo kwixesha elide.
Ngobambiswano, wonke umntu kufuneka abe nexesha lokuzilibazisa, nangona abantwana babo. Apha, amaqabane kufuneka ahlangane, kuba xa ulandela izinto zokuzilibazisa, umzimba ukhulula uxinzelelo kwaye ungaphinda uzalise amabhetri akho. Kuyafana nakwiyangqa yezihlobo. Ngokuqhelekileyo ubuhlobo bexesha elide bunzima ngenxa yeengxaki zenkcitho zabazali, ngakumbi ukuba abahlobo ngokwabo basenabantwana kwaye abanako ukuqonda ukuba umntu ukhathele kakhulu kusihlwa ukuthetha ixesha elide.
Abantwana kunye nentsebenziswano
Kwakhona apha: Ishedyuli ehleliweyo. A: "Siyakwazi ukudibana kwakhona ngexesha elithile" akuncedi mntu. Ngokukodwa intlanganiso kunye nabahlobo kunye nokuhlakulela izinto zokuzilibazisa kudla ngokufutshane, apha uza kufumana isiqwenga emva kwayo. Ngaloo ndlela, ubugcisa obuninzi bentsapho encinci, ngokubhekisele kwimihla ngemihla ebomini yokuphila, okuyiyo nayo inomzuzu ongalibalekiyo wokubonelela iziqithi ukudala nokutshaya iibhetri zakho apha.
Ukucebisa umtshato kuzuza
Ukuba konke oku akunakunceda okanye akukho ixesha elaneleyo eliseleyo, kunokukwazi ukufumana uncedo kwi-professional. Iingcali zengqondo zisoloko zinika isiluleko somtshato esichaza ngokukhawuleza imbangela, ingxaki engundoqo. Enyanisweni, izibini kufuneka zisebenze ngokwabo. Kodwa ukuba ulwalamano lwabo lufanelekile into ethile, akufanele bafihle kwaye bathabathe i-blinkers yobomi bemihla ngemihla. Kuba, ngokuqinisekileyo, akuyiyo inzala yokugxeka iingxaki, kodwa ukukwazi kwabazali ukujamelana noxinzelelo.
Abazali nabo bafuna ikhefu ... Kubambiswano
Ukhohlisiwe - ntoni ngoku? | ubambiswano
Amagama apetro kunye nencazelo yawo ubambiswano
Umda wobudala | Intsebenziswano kunye nothando
Ixhala lokuxhalabisa ... ubambiswano
Iveki yamaRoma Ukuthandana
Ubuhlobo bobulili obufanayo ... Ukuza kubambisana
Ukuhlamba kunye kunye neqabane lakho Ukusebenzisana
Umbongo we-Erotic | Ukuthandana ngokubambisana